GQ Awards 2016:Magacyada dadka ku guuleystey Abaal Marinta oo la shaaciyey. - Hablaha Media Network
GQ Awards 2016:Magacyada dadka ku guuleystey Abaal Marinta oo la shaaciyey.
HMN:- Ranveer Singh, Kangana Ranaut, Amitabh Bachchan, Tiger Shroff, Radhika Apte iyo xidigo kale oo Bollywood-ka ka tirsan ayaa gurigooda u qaateen abaal marinta GQ Awards 2016 oo ay ku guuleesteen.
Qaar ka mid ah xidigaha Bollywood-ka ugu caansan ayaa ka qayb galeen bandhiga abaal marinta GQ Awards 2016 waxaana ka mid ahaa shaqsiyaadkii ka qayb galeen Ranveer Singh, Kangana Ranaut, Amitabh Bachchan, Tiger Shroff, Waluscha De Sousa, Saif Ali Khan, Huma Qureshi, Sarah-Jane Dias, Kunal Kapoor, Diana Penty, Pooja Hegde, Disha Patani iyo kuwo kale.
Ranveer Singh atooraha sanadka ugu wanaagsan ama Actor of The Year Award ayaa la siiyay waana bilad uu u qalmo marka la fiiriyo wacdarihii uu dhigay filimkiisii Bajirao Mastani sanadkii hore.
Kangana Ranaut ayaa ku guuleesatay abaal marinta muhiimka ah ee awooda dumarka lagu cabiro gudaha Hindiya ee loo yaqaan Women of the Year Award halka Big Bachchan uu isagan ku guuleestay abaal marinta The Legend Award.
Saif Ali Khan ayaa qaatay abaal marinta xiisaha badan gaar ahaan jilaaga ugu xarakada badan Bollywood-ka (Stylish Award0.
Fadlan hoos kaga bogo guud ahaan guuleestayaasha abaal marinta GQ Men of the Year Awards 2016:
Sportsman: Devendra Jhajharia.